MAHAJANGA : Hanavaozana tsena sy hanampiana ny mpamboly anana ny CLD
Vola 300 000 tapitrisa no nomen’ny fanjakana ny comité local de developpement na Cld isaky ny distrika misy depiote roa. 14 novembre 2017
Ny faran’ny herinandro teo no nidina ifotony ny solombavambahoaka voafidy teto Mahajanga Rahantanirina lalao antsoina koa hoe Nina. Ny bazary Antanambao Sotema no notsidihany ary nolazainy fa hohatsaraina. Taratry ny fandrosoana, hoy izy ny tsena ary mampadio ny tanàna. Ny tsena misy amin’izao dia tsy mametraka intsony ny fandriam-pahalemana sy ny filaminan’ny mpivarotra ary tsy mahasarika ny mpividy ihany koa ka mila fanamboarana.
Efa nanatona ny ben’ny tanàna izy, hoy hatrany ny fanazavany mikasika ny fanamboarana tiany hatao. Nisaotra azy moa ireo mpivarotra ; fantatra ihany koa fa hovatsiana ara-pitaovana ireo tantsaha mpamboly felika eny Amborovy, ho fanatsarana ny asa sy ny fari-piainan’izy ireo ary ho fampiakarana ny vokatra ihany koa.
Tsara ny asa sy fanatsarana natao hatramin’izay, noho io Cld io satria dia mikasika ny fampandrosoana avokoa. Ny indro kely fotsiny dia ny tsy fahampian’ny mangarahara amin’ny fampiasana ny vola izay tsy tokony hohadinoina fa volam-bahoaka.